LG V10 ma cabiro markay tahay baytariga Androidsis
Manuel Ramirez | | Batariga, LG, Noticias
Shalay waxaan faallo ka bixinaynay isticmaalka xad-dhaafka ah ee mid ka mid ah barnaamijyada sida aadka ah ay u isticmaalaan dadka isticmaala. Barnaamijka Facebook-ga ayaa ah dambiilaha in waxqabadka taleefanka iyo batteriga ay si aad ah hoos ugu dhacaan, marka waa in qofku si dhab ah uga fikiro bal inay lagama maarmaan tahay in la rakibo. Waxaa jira xalal qaar sida adoo adeegsanaya biraawsarka Chrome, kaas oo ku jira nooca mobilada u shaqeeya sida soojiidashada ah si loola xiriiro saaxiibadeena ama qoyskeena iyada oo loo marayo shabakaddan bulshada. Dhibaato kale oo isticmaale leh ayaa leh terminal taas oo ay ugu wacan tahay astaamo farsamo oo gaar ah oo aan la heli karin dheelitirka saxda ah ee isticmaalka saxda ah batteriga aad haysato.
Mid ka mid ah taleefannada casriga ah ama kiniiniyadaas ayaa ah dhawaan la sii daayay LG V10. Terminal laga yaabiyo astaamo gaar ah sida guddiga sare ee ku yaal xagga sare shaashadda weyn iyo tan, ma aha oo kaliya hal kamarad hore, laakiin labo. Sharad weyn oo uu soosaaraha Kuuriya ku sameeyay taleefan 5,7-inji ah oo wata shaashad Quad HD ah oo uu weheliyo 'Snapdragon 808 chip', taas oo ah waxa nolosha siinaya dhammaan geeddi-socodyadan si ay si dhammaystiran uga shaqeeyaan taleefannadan casriga ah oo ahaa wax lala yaabo. Naafada weyn ee kaliya ee ay leedahay waa muddada nolosha batteriga, mid ka mid ah kuwa ugu xun telefonada leh shaashad ballaaran.
1 Batariga aan si adag wax u socon
2 Ku gudubida imtixaanada
Batariga aan si adag wax u socon
Ma dhihi karo waxba, maxaa yeelay haddii aan isbarbar dhigno taleefoonnada kale sida Xperia Z3 compact, wax badan bay iska fogeysaa waxa ay hesho taleefankan. Laga soo bilaabo Telefoonka Arena waxaa la qaaday tijaabooyin taxane ah oo xaqiijinaya waxa dhowr isticmaale ay ka faalloonayeen taleefankan oo ay ku jiraan faahfaahin taxane ah oo ku saabsan qalabka, si hufan oo cajiib ah.
Bandhig QuadHD 5,7-inji ah iyo guddi sare oo ogeysiisyo ah wuxuu si toos ah noogu geynayaa taleefan casri ah oo isagu isagu ka dalbanaya batteriga 3.000 Mah. Xallinta sare, shaashad ballaaran iyo mid labaad ayaa noo horseedaysa imtixaannadaas ay ku ogaadeen in V10 uusan u dhaqmin sidii la filayay.
Waxaan horeyba u ogaanay sida ay u sii kordhayaan isticmaaleyaashu waxay doorbidaan inay yeeshaan terminaal maalinta ku qaadan kara wax ka badan intii ku filan, halkii aad ka heli lahayd qalabka ugu fiican, RAM-ka ugu weyn ama shaashadda oo leh xallin 4K ah. Samsung Galaxy S6 oo u gaar ah Samsung ayaa leh dhibaato batari iyadoo u adeegsaneysa awood dheeri ah gudiga ogeysiiska geeska iyo xalka QuadHD.
Ku gudubida imtixaanada
Imtixaanada la qaadayo waxaa lagu dhejiyaa batteriga V10 sida ugu xun ee telefoonada ugu waaweyn shaashadda. Websaydhkani wuxuu soo gudbiyay qoraal caado ah oo u ekeysiinaya isticmaalka nolosha batteriga caadiga ah si loo cabbiro waxqabadka batteriga si ay ugu dhigmaan isla xaaladaha. Heer 200 nits ah ayaa lagu dejiyay taleefannada casriga ah ee kala duwan ee la tijaabiyay. Imtixaanka ayaa qoraalkaasi markasta ku shaqeynayaa shaashadda kumbuyuutarka ee joogtada ah illaa uu batterigu aakhirka dhinto.
LG V10 ayaa helay wax yar 5 saacadood iyo 51 daqiiqo oo nolosha batteriga ah, aad uga hooseeya taleefannada kale sida Samsung Galaxy Note 5 ama Apple's iPhone 6S Plus. Labadani waxay heleen 9 saacadood iyo 11 daqiiqo labadaba, taas oo ficil ahaan 3 saacadood iyo badh ka dheer taleefanka cusub ee LG.
Mid ka mid ah xogta xiisaha leh ee tijaabooyinkaas ayaa ah in LG V10 uu sameeyo wuxuu siiyay natiijooyin aad ufiican oo ku saabsan xukun deg deg ah iyada oo 65 daqiiqo lagu dhammaystirayo, halka Xusuusin 5 ay qaadatay 81 daqiiqo kan Applena ay sii socdeen ilaa 165 daqiiqo. Sidaad u dhihi laheyd ma jiraan wax dhibaato ah oo aan imaanaynin, in kastoo aysan taasi hagaajinaynin dhibaatada ay LG iminka ku haysato shaygan la helay waqtigii ugu xumaa dhamaan boosteejooyinka la baaray
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Nolosha batteriga ee LG V10 waxay ka mid tahay kuwa ugu xun telefoonnada loo yaqaan 'phablets'.
Haa ???? Ma uusan ogeyn
Jawaab Jose Chan
5 saacadood oo shaashad ah ??
Jawaab Angel Gonzalez
5 saacadood ilaa inta taleefanka la daminayo marka la isticmaalayo qoraalka tijaabada ee shaashadda ku jira mar walba.
Sergio Guerrero Lopez sawir muuqaal ah dijo
Waxaan u maleynayay inay ahayd casriga casriga ee sanadka
Jawaab Sergio Guerrero Lopez
5 saacadood oo shaashad ah ?? Taasi waa waqti aad u badan, maalinta cid kale cidina taleefankooda kuma hayaan shaashadda 5 saacadood, ilaa aad had iyo jeer la shaqeyso ama aadan xD caajis ahayn, taleefanka ku siiya 3 saacadood horayba wuu u fiicnaaday oo waa 4 yaab leh ( marka laga reebo taasi noqo ku xigeen sidaan idhi)
Sidee xiiso leh oo xiiso leh in muddadii loogu talagalay ee bateriga ay ku muuqato cinwaanka qoraalka oo aan ahayn kharashka degdegga ah ee ay ku qaadato farqiga u dhexeeya boosteejooyinka kale. Tag tag !!!
Jawaab Gonzalo CN
In kasta oo ay run tahay in baytarigu waxyar soconayo, haddana ma sheegaan waxtarka lacag-bixinta degdegga ah iyo in (ugu yaraan Mexico) ay la timaaddo batari dheeri ah si loogu beddelo.
Shaki la'aan batteriga ugu xun. Waxaan u arkaa in LGv10 uusan ku habboonayn adeegsiga xirfadeed. Meziko waxay ku siinayaan baytariga hadiyad ahaan maxaa yeelay LG waxay u maleyneysaa in bartamaha maalinta aad noqon doonto 15%. Qofna caban maayo laakiin marka taleefanku xawaare sare ku socdo oo lagugu qasbay inaad wiciso wax ka badan 5 daqiiqo way kululaaneysaa ilaa heer aad looga xumaado inaad dhegta ku dhigto. Haddii aad rabto in batteriga uu sii jiro oo uusan kululeyn, samee waxyaabaha soo socda: Kala fur shaashadda labaad, ha u adeegsan Wi-Fi, ha isticmaalin barnaamijka facebook iyo wax badan oo ka yar barnaamijka twitter-ka, demi barnaamijyada ku shaqeeya xagga dambe iyo markaa waxaad yeelan doontaa taleefan gacmeed kaas oo iman doona lixda galabnimo.